Ö-stugan - Stora Hammarsjöområdet | Shanyira Hultsfred
musha » pokugara » Dzimba » Ö-stugan - Stora Hammarsjöområdet
Renda kottage pachitsuwa chako wega.Zvakanakira iwe uri kutsvaga rugare nerunyararo.
Gara pachitsuwa chako pachako mukamba kadiki kwevanhu vana. Iyo kottage iri munzvimbo yeStora Hammarsjö inova chikamu chechimiro uye yekuchengetedza hove nzvimbo. Kune anofarira hove, uyu mukana wegoridhe!
Iyo kottage iri 50 sqm ine makamuri maviri uye kitchenette. Imwe yekurara ine mbiri mbiri nemubhedha wemubhedha. Inotonhorera, hotplates, gasi chitofu, chitofu, kunwa mvura mugaba, chimbuzi chekunze. Tara yakakura ine fenicha yemunda, bhengi.
Mutengo wacho unosanganisira chikepe chine injini nezvikwasviso.
Kubhadharisa nharembozha uye iPad zvinogona kuitirwa kuHultsfred's Tourist Ruzivo
Parera shoma! Uye iyo Hultsfred Yevashanyi Ruzivo vatambi vakangonaka!
7 / 18 / 2020
Yakakwana kune iwe unofarira rugare nerunyararo, hove, kushambira, rwendo rwechikepe nezvimwe.
Mwaka wakaderera SEK 875 / zuva
Mwaka wepamusoro SEK 920 / zuva
5 wongororo paGoogle